DEG DEG: Qarax AMISOM lala eegtay & Rasaas ka socoto qeybo ka mid ah Muqdisho… – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDEG DEG: Qarax AMISOM lala eegtay & Rasaas ka socoto qeybo ka mid ah Muqdisho…
DEG DEG: Qarax AMISOM lala eegtay & Rasaas ka socoto qeybo ka mid ah Muqdisho…
Kolonyo ay la socdeen Ciidamo ka tirsan AMISOM ayaa waxaa goordhow qarax lagula eegtay Xaafada Suuqa xoolaha ee degmada Hurwaa.
Miinada nooca dhulka lagu aaso ah ayaa waxaa la sheegay in Ciidamada AMISOM lagula eegtay Xaaafda suuqa xoolaha gaar ahaan halka loo yaqaano buurka oo ah Goob aad u masqhuul badan.
Qof ka mid ah dadka Suuqa Xoolaha ayaa Warbaahinta u sheegay in qaraxa kadib ciidamada AMISOM ay fureyn rasaas farabadan,isla markaana ay ku geeriyoodeen saddex ruux oo shacab ah.
Waxa uu sheegay in qaraxa ka hor uu socday banaanbax ay dhigayeen dadka ku nool Xaafada Suuqa Xoolaha,iyaga oo ka cabanayey Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo shalay dad Shacab ah shalay halkaasi ku dilay.
Xaalada ayuu shegay in weli Maanta ay tahay mid kacsan,sidoo kale dhammaan la xiray goobihii Ganacsiga ee suuqa xoolaha,sidoo kalena mid ka mid ah Gawaarida AMISOM oo uu qaraxa haleelay uu yaalla goobtii lagula eegtay.
AKHRISO: Sharuudo adag oo lagu xiray diyaaradaha ka howlgala Garoonka Adan Cadde & Wel wel soo wajahay…
Guddoomiyaha G/Shacabka & Wafdi uu hogaaminayo oo ka degay Jowhar & Ujeedka safarkooda oo…